Mandrindra ny varotra manerantany ho an'ny marika iray any amin'ny firenena 23
Alatsinainy Janoary 9, 2017 Nate Holmes
Fotoana famakiana: 3 minitra Amin'ny maha marika manerantany anao dia tsy manana mpijery manerantany ianao. Ny mpihaino anao dia misy mpihaino isam-paritra sy eo an-toerana. Ary ao anatin'ny tsirairay amin'ireo mpijery ireo dia misy tantara manokana azo raisina sy hotantaraina. Ireo tantara ireo dia tsy miseho majika fotsiny. Tsy maintsy misy ny fandraisana andraikitra hikarohana, hisambotra ary hizara azy ireo. Mila fifandraisana sy fiaraha-miasa izany. Rehefa mitranga izany dia fitaovana matanjaka mampifandray ny marikao amin'ny mpihaino manokana anao. Ka manao ahoana ianao
Ilay Tany Nampanantenaina: ROI Marketing mahomby sy maharitra eo alohan'izay
Talata, Oktobra 20, 2015 Zoma, Oktobra 23, 2015 Katie Karr
Fotoana famakiana: <1 minitra Tongasoa eto amin'ny antsoin'ny teknolojia marketing hoe The Customer Experience Era. Amin'ny 2016,. Loharano: Gartner Raha mbola mivoatra hatrany ny fitondran-tena sy ny haitao, dia tokony hifanaraka amin'ny dian'ny mpanjifa ny paikadim-barotrao. Ny atiny mahomby ankehitriny dia tarihin'ny traikefa - oviana, aiza ary amin'ny fomba ahoana no itadiavan'ny mpanjifa azy. Ny traikefa tsara amin'ny fantsom-barotra rehetra no lakilen'ny tokana lehibe indrindra amin'ity fivoarana ity. Widen dia nandinika an'io tranga io tato ho ato
Fomba fampiasana tsara ny tantara an-tsary momba ny marikao amin'ny 2015
Talata, Jolay 14, 2015 Alarobia, Jolay 15, 2015 Jenn Lisak Golding
Fotoana famakiana: 2 minitra Na dia mety ho vaovao aza ny fitantarana an-tsary ny buzzword dia tsy izany. 65% amin'ny vahoaka amin'ny ankapobeny dia mianatra amin'ny fahitana, ary tsy miafina izany fa ny sary, sary ary sary no sasany amin'ireo atiny tena ankafizin'ny tambajotra sosialy. Ny mpivarotra dia raisina an-tanana lavitra ny marketing amin'ny alàlan'ny famolavolana sy fanamboarana ny foto-kevitra momba ny fitantarana an-tsary izay ampiasantsika sary hilazana tantara iray. Fa maninona no mandeha ny fanaovana tantara an-tsary? Milaza ny siansa
ProofHQ: Fanaporofoana an-tserasera sy fiasa mandeha ho azy
Zoma, Aprily 17, 2015 Alatsinainy, May 4, 2015 Douglas Karr
Fotoana famakiana: 2 minitra ProofHQ dia rindrambaiko fanamarinana an-tserasera miorina amin'ny SaaS izay mandrindra ny fijerena sy ny fankatoavana ny atiny sy ny fananana famoronana mba hahavitana haingana kokoa ireo tetik'asa ara-barotra ary tsy misy ezaka firy. Manolo ny fizotran'ny mailaka sy ny kopia sarotra izy io, manome fitaovana ho an'ny ekipa mpandinika hijerena miaraka ny atiny famoronana, ary fitaovana ho an'ny mpitantana ny tetikasa marketing hanarahana ny famerenana. ProofHQ dia azo ampiasaina amin'ny haino aman-jery rehetra, anisan'izany ny pirinty, nomerika ary audio / visual. Matetika, ny fananana famoronana dia dinihina ary ekena amin'ny fampiasana
Ny fiantraikan'ny fitantanana nomerika nomerika amin'ny fitantanana atiny
Asabotsy, Aprily 4, 2015 Douglas Karr
Fotoana famakiana: <1 minitra Tao amin'ny lahatsoratra teo aloha, niresaka momba ny atao hoe Digital Asset Management isika, ny antony maha-zava-dehibe ny fitantanana ny fananana nomerika amin'ny marketing amin'ny ankapobeny, ary koa ny fomba hanamarinana ny fandaniana amin'ny fitantanana ny fananana nomerika. Amin'ity infographic avy any Widen ity dia asiany antsipirihany ny pitsopitsony momba ny fomba hanampian'ny fitantanana ny fananana nomerika anao hametraka paikady fitantanana votoaty mahomby kokoa. Raha ny tena manokana, ny fametrahana sy fanaraha-maso ny atiny ao amin'ny trano fitahirizana afovoany dia mahomby kokoa noho ny fananana votoaty miparitaka
Page 1 ny 3